Together အသုံးပြုမှု စည်းမျဉ်းများ - Together
အသုံးပြုမှု စည်းမျဉ်းများ လက်ရှိစာမျက်နှာ
စတင်သက်ရောက်ချိန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ • ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချိန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ
ဤအသုံးပြုမှု စည်းမျဉ်းများ (“စည်းမျဉ်းများ”) တွင် Together ဝဘ်ဆိုက် https://together.stjude.org၊ Together အွန်လိုင်း ကွန်မြူနတီနှင့် Together (“Together”) နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားဝဘ်ဆိုက်များ၊ လင့်ခ်ချိတ်ထားသော စာမျက်နှာများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့် St. Jude Children’s Research Hospital Inc. (“St. Jude၊” “ကျွန်ုပ်တို့၊” “ကျွန်ုပ်တို့၏” သို့မဟုတ် “ကျွန်ုပ်တို့”) က ရေးဆွဲပြီး ပိုင်ဆိုင်သော အခြားသက်ဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်သုံးမှုနှင့် အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ Together နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ (“ဝန်ဆောင်မှုများ”) ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းမျဉ်းများကို သဘောတူပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအားလုံးကို လိုက်နာရန် သဘောတူရာရောက်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်အသုံးမပြုမီ စည်းမျဉ်းများကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။ ဤစည်းမျဉ်းများကို နားမလည်ပါက အောက်ပါအချက်အလက်များအား အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ဤစည်းမျဉ်းများဖြင့် ကန့်သတ်မှုကို သဘောမတူပါက သင်သည် ဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဝင်သုံးခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ရယူစုဆောင်းမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် ကိုးကားရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တစ်ပါတည်းပါဝင်သော Together ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုပါ။
စည်းမျဉ်းများတွင် သင့်အခွင့်အရေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်
အဆိုပါစည်းမျဉ်းများတွင် သင့်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်မကင်းမှုကို ကန့်သတ်သော၊ အငြင်းပွားမှုများကို တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် ခုံသမာဓိနည်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းပြီး အုပ်စုကိုယ်စား သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုမှုအလိုက် ဖြေရှင်းခြင်းမရှိစေရန် သင့်ကို သတ်မှတ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် သင့်အထွေထွေ၊ တစ်ကိုယ်ရေနှင့် ပညာပေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများသည် ဆေးကုသမှုပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပေးရန် မရည်ရွယ်ပါ၊ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူတစ်ယောက်အတွက် ကုသရေးနည်းလမ်းအဖြစ် ရပ်တည်ရန် သို့မဟုတ် ဆရာ၀န်-လူနာ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရာတွင် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုစေရန် မရည်ရွယ်ပါ။
သင့်ရောဂါလက္ခဏာ သို့မဟုတ် အခြေအနေသည် အရေးပေါ်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသည်ဟု ယူဆပါက ၉၁၁ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းအရေးပေါ် ကျန်းမာရေးစနစ်ထံသို့ ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီမှု
အဆိုပါစည်းမျဉ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း ပါဝင်သောအကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များနှင့် အခြားအချက်အလက်ကုန်ကြမ်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ပေးသူများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်သည့်အခါ “သင်” သို့မဟုတ် “သင်၏” ဟု ရည်ညွှန်းချက်အားလုံးသည် ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်အပြုအမူဖြင့်မဆို ဝင်သုံးသော သို့မဟုတ် အသုံးပြုသောသူနှင့် သင်၏ အမွေခံ၊ လွှဲအပ်ခံရသူနှင့် ဆက်ခံသူ တစ်ဦးစီကို ဆိုလိုသည်။ သင့်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အခြားသူတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကူညီပါက အတိုပါစည်းမျဉ်းများသည် ကူညီသူ၊ အကူညီခံသူနှင့် St. အသက်ဝင်ပါမည်။
ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) နှစ်နှင့်အထက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ တရားဝင် တာဝန်ခံမှုရှိသော စာချုပ်များတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိကြောင်း ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံရာရောက်ပါသည်။ သင်သည် အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက သင်၏မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူက ဤစည်းမျဉ်းများကို ဖတ်ရှုပြီး သဘောတူရပါမည်။ သင့်မိဘ သို့မဟုတ် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူက စည်းမျဉ်းများကို သဘောမတူပါက (သို့မဟုတ် မလိုက်နာနိုင်ပါက) သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းများတွင် ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့် သုံးစွဲမှုအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ ရယူစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းကို သဘောတူရာရောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မည်သို့ကာကွယ်ကြောင်း သိရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် ("HIPAA") ဟု ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသည့် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုင်ရာ အဆင်ပြေချောမွေ့မှုနှင့် တာဝန်ခံယူမှု အက်ဥပဒေတွင် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်း (သို့) လုပ်ငန်းတွဲဖက်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ St. Jude က စုဆောင်းနိုင်သည့် အကာအကွယ်ပေးထားသည့် ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များ (“PHI”) နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ St. Jude သည် ၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများ သတိပေးချက်နှင့် လုပ်ငန်းတွဲဖက် သဘောတူညီမှုများရှိ ဖော်ပြချက်များနှင့် စာချုပ်ပါ ဝတ္တရားများနှင့်အညီ PHI ကို ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသည်။ သင့် PHI ကို St.Jude က အသုံးပြုမှု နှင့် ဖွင့်ဟဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် သင့် PHI နှင့် စပ်လျဉ်းသော သင့်အခွင့်အရေးများအတွက် မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများ သတိပေးချက်ကို ဖတ်ရှုပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် PHI ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက အောက်တွင်ပါရှိသော “ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်” ကဏ္ဍအတွင်းရှိ အသေးစိတ်အချက်များကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များအဖြစ် မသက်ရောက်စေပါ
စာသားများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်များသို့ လင့်ခ်များနှင့် အခြားသောအကြောင်းအရာ (“ပါဝင်သောအရာ”) အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်သောအရာများသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ သင်သည် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပေါ် မှီခိုအားထားပါက ဖြစ်လာသမျှ ကိစ္စအဝဝသည် သင့်တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သင်လက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု၊ စိတ်ချယုံကြည်ရမှု၊ ရရှိနိုင်မှု၊ ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုမှုအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးမှု၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကုသမှုကို အစားထိုးရန် မရည်ရွယ်ပါ။
သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော၊ အထူးသဖြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကုသခြင်းတို့ လိုအပ်နိုင်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးဦးနှင့် တိုင်ပင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကသာလျှင် သင့်အတွက် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သော အကြံပြုချက်များကို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အခြား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ အကြံဉာဏ်ကို အမြဲတောင်းခံပါ။ သင့်တွင် ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခု ရှိနေသည်ဟု ယူဆပါက၊ သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် 911 ကို ချက်ချင်းခေါ်ပါ။ St. Jude သည် ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် တင်ထားသော တိကျသည့် စမ်းသပ်မှုများ၊ ဆရာဝန်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ထင်မြင်ချက်များ သို့မဟုတ် အခြားသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုခုကိုမျှ အကြံပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံခြင်းမရှိပါ။ St.Jude မှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူအခြားသောသူများမှ ဖြစ်စေတင်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှအား မှီခိုအားထားခြင်းသည် သင်၏အပေါ် ၌သာလျင် လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိသည်။ St.Jude မှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူအခြားသောသူများမှ ဖြစ်စေတင်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှအား မှီခိုအားထားခြင်းသည် သင်၏အပေါ် ၌သာလျင် လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိသည်။
သုံးစွဲသူများသည် အကောင့်မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော် အကြောင်းအရာများကို ပေးပို့ခြင်း၊ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကို အခြားနည်းဖြင့် ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို ဝင်သုံးပြီး ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် သင်သည် စကားဝှက်တစ်ခုဖြင့် ကာကွယ်ထားသော Together ကွန်မြူနတီအကောင့် (“အကောင့်”) တစ်ခုကို ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အဆိုပါလက္ခဏာရပ်များကို အသုံးပြုလိုပါက သင်သည် St. Jude အား စစ်မှန်သော၊ တိကျမှန်ကန်သော၊ ပြည့်စုံသော၊ လက်ရှိဖြစ်သော မှတ်ပုံတင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရပါမည်။ သင်သည် အကောင့်မှတ်ပုံတင်ချိန်အတွင်း တိကျမှန်ကန်သော၊ လက်ရှိဖြစ်သော၊ ပြည့်စုံသော အချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန်နှင့် ထိုအချက်အလက်များ ဆက်လက်ပြီး တိကျမှန်ကန်စေရန်၊ လက်ရှိဖြစ်စေရန်နှင့် ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အကောင့်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင် ဝင်သုံးခွင့်အပေါ် ရပ်ဆိုင်းခွင့် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်နောက်ပိုင်း ပေးအပ်သော အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာသည် တိကျမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ လက်ရှိမဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဉ်းများကို အခြားနည်းဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်းရှိကြောင်း သက်သေထင်ရှားပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အကောင့်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင် ဝင်သုံးခွင့်အပေါ် ရပ်ဆိုင်းခွင့် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်သော အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုရန်အတွက် Together ကွန်မြူနတီအကောင့်နှင့် Together ကွန်မြူနတီ ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါမည်။
သင်၏ Together ကွန်မြူနတီ အကောင့်စကားဝှက်နှင့်တကွ သက်ဆိုင်မှုရှိပါက သင်၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအကောင့် စကားဝှက်ကို လုံခြုံစွာထားရှိရန် သင့်ထံတွင် အပြည့်အဝ တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏ Together ကွန်မြူနတီအကောင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအတွက် သင့်ထံတွင် အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်။ သင်၏ Together ကွန်မြူနတီအကောင့်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုနေခြင်းအား St. Jude သို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန် သင် သဘောတူသည်။ St. Jude တွင် သင်၏ Together ကွန်မြူနတီအကောင့်အား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုမှု၊ သို့မဟုတ် ခိုးယူခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းခြင်း၊ လက်ဆော့ခြင်းကဲ့သို့ သင် သတိပြုမိသော အကောင့်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် တစ်ဖက်ဖက်တွင် ဖြစ်ပွားရသည့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ အထက်ပါဖြစ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိုသို့ သင့်အကောင့်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုမှုကြောင့် St. Jude သို့မဟုတ် အခြားသူများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိနိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်မှုများအတွက် သဘောတူညီချက်
ဝန်ဆောင်မှုများအား သင် အသုံးပြုမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သင်သည် အလိုအလျောက် ခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်အသံသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ထားသည့် အကြောင်းကြားချက်များ၊ စာသားမက်ဆေ့ဂျ်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ အီးမေးလ်များနှင့် အခြားအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များ၊ အသင်းဝင်များသည် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေး ဆက်သွယ်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှု ကြေညာချက်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မက်ဆေ့ဂျ်များကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မှုအချို့ကို သင့်ထံပေးပို့ရန် လိုအပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဆန္ဒရှိနိုင်သည်။ သင်သည် ထိုကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရန် သဘောတူပြီး သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သည့် ထိုကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်မှုများသည် ပေးပို့ချိန်တွင် တရားဝင်သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သင် သဘောတူသည်။ အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာဟူသမျှသည် အကြောင်းကြားစာများကို စာဖြင့် ရေးသားပေးပို့ရန်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်ဟူသမျှနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း သင်သဘောတူသည်။ သင်သဘောမတူပါက ဤသဘောတူညီချက်ကို လက်မခံပါနှင့်။
သင်သည် အချို့သော အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံခြင်းမှ ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါက တောင်းဆိုသည့်အခါ စာရွက်စာတမ်းနှင့် မှတ်တမ်းအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကို ပေးအပ်ပါမည်။ သင်သည် ဤစည်းမျဉ်းများ၏ အဆုံးရှိ “ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်” ကဏ္ဍအောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်သဘောတူမှုကို ရုပ်သိမ်းပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်သဘောတူညီချက်များကို ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာများကို လက်ခံရန် သို့မဟုတ် ဝင်သုံးရန်အတွက် သင့်ထံတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်နှင့် ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် ကိုက်ညီသော ဝဘ်ဘရောက်ဇာရှိသည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခု ရှိရပါမည်။ သင်သည် ဖိုင်များကို Portable Document Format (အိတ်ဆောင် စာရွက်စာတမ်း ဖောမက်) (“PDF”) ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလည်း လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ထံပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာများကို ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် သင့်စက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာတွင် PDF ဖိုင်များအပါအဝင် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်မှုများကို ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းများကို သဘောတူခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာများကို လက်ခံရန်၊ ဝင်သုံးရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် အစွမ်းရှိကြောင်း အတည်ပြုသည်။ သင်သည် ဤစည်းမျဉ်းများ၏ အဆုံးရှိ “ကျွန်ုပ်တို့ထံ မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း” ကဏ္ဍအောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အသိပေးချက်လက်ခံရန် ရည်ရွယ်ထားသော သင့်အီးမေးလ်ကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
သင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတိုဖြင့် ဆက်သွယ်ပါက ထိုသို့သော ဆက်သွယ်မှုများသည် မလုံခြုံသော ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများမှတစ်ဆင့် သွားလာသောကြောင့် လုံခြုံမှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ လျှို့ဝှက်သော သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတိုဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မှုများကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတိုမှတစ်ဆင့် လက်ခံရန် သဘောတူခြင်းဖြင့် သင်သည် ပေးပို့သည့်လမ်းကြောင်းတွင် ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောအန္တရာယ်များနှင့် ပျက်စီးမှုများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သဘောတူရာရောက်သည်။
ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကယ်ရီယာကို အသုံးပြုမှု
ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကယ်ရီယာ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားအင်တာနက်သုံးစွဲမှု နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် လိုအပ်နိုင်ပြီး သင့်တွင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းရင်းများရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲ၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သဘောတူသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန် အင်တာနက်သုံးခြင်းဖြင့် သင့်စာချုပ် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ ရယူထားသော အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်၍ သင်သည် သင့်ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကယ်ရီယာ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားအင်တာနက်သုံးစွဲမှု နည်းလမ်းသို့ ကျသင့်ငွေ ပေးဆောင်ရနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျသင့်ငွေပေးဆောင်ရမှုသည် သင့်တွင်သာ အပြည့်အဝတာဝန်ရှိကြောင်း သင် နားလည်သဘောပေါက်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုမှုသည် သင့်ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကယ်ရီယာ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားအင်တာနက်သုံးစွဲမှုနည်းလမ်း၏ သတ်မှတ်ချက်အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူသည်။ မက်ဆေ့ဂျ်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာကျသင့်ခအတွက် သင်၏ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး ကယ်ရီယာထံမှ ကျသင့်ငွေတောင်းခံမှုများအား ပေးဆောင်ရန် သင့်တွင် တာဝန်ရှိသည်။
St. Jude သည် သင့်ကို ဝန်ဆောင်မှုများသို့ အကြောင်းအရာများ (“သုံးစွဲသူ အကြောင်းအရာများ”) ကို ပို့စ်တင်ရန်၊ အပ်လုဒ်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ပြန်ရန်၊ ပေးပို့ရန် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာများကို ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း (“ပို့စ်” သို့မဟုတ် “ပို့စ်တင်ခြင်း”)ဖြင့် သင်သည် St. Jude အား တစ်ကမ္ဘာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော၊ ယတိပြတ်ဖြစ်သော၊ ရာသက်ပန်ဖြစ်သော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်းနိုင်သော၊ မူပိုင်ကြေး ကင်းလွတ်သော လိုင်စင်ပေးအပ်ပြီး ထိုကဲ့သို့သော သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာကို ဝန်ဆောင်မှုများအား ပေးအပ်ရန်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင် ခွင့်ပြုထားသော အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ထပ်ဆင့်လိုင်စင်ပေးခွင့်နှင့်အတူ အသုံးပြုရန်၊ ကူးယူရန်၊ မှီငြမ်းရန်၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်၊ ဖြန့်ဖြူးရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်၊ ထုတ်လွှင့်ရန်၊ ဝင်သုံးရန်၊ ကြည့်ရှုရန်နှင့် အခြားနည်းဖြင့် အသုံးချရန် ခွင့်ပြုသည်။ St. Jude သို့ ဤအကြောင်းအားဖြင့် ပေးအပ်သောလိုင်စင်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းသည်အထိ သက်တမ်းရှိပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ သင်ပို့စ်တင်သော သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုရန်နှင့် အသုံးချရန်အတွက် သင့်အခွင့်အရေးများကို ဤစည်းမျဉ်းများတွင်ပါရှိသော မည်သည့်အကြောင်းအရာကမျှ ကန့်သတ်ခြင်း မရှိပါ။
သင် ပို့စ်တင်သော သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာအားလုံးအတွက် သင့်တွင် အပြည့်အဝတာဝန်ရှိကြောင်း သင် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သဘောတူသည်။ သင်သည် အောက်ပါတို့ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံသည်- (က) သင်သည် သင် ပို့စ်တင်သော သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာအားလုံးကို တစ်ဦးတည်းနှင့် သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော သုံးစွဲသူ အကြောင်းအရာများကို ဤစည်းမျဉ်းများတွင် ချိန်ဆထားသည့်အတိုင်း St.Jude အား ပေးအပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အခွင့်အရေး၊ လိုင်စင်၊ သဘောတူချက်နှင့် ထုတ်ပြန်ချက်အားလုံးသည် သင့်ထံတွင်ရှိကြောင်း။ (ခ) သုံးစွဲသူ အကြောင်းအရာ၊ သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာကို သင်က ပို့စ်တင်မှု သို့မဟုတ် သင့်သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာကို ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ နည်းလမ်းများဖြင့် St. Jude က အသုံးပြုမှု (သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ မူပိုင်မှု၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်သွယ်မှု လျှို့ဝှက်ချက်၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များ၊ သို့မဟုတ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် သီးသန့်ရှိခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို ထိပါးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း မရှိကြောင်း။ St. Jude သည် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များနှင့် မီဒီယာအမျိုးမျိုးတွင် ထုတ်လွှင့်ရန်၊ ပြသရန် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာကို ထပ်တိုးပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လိုက်ဖက်စေရန် ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့်/သို့မဟုတ် ကွန်ရက်များ၊ စက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် မီဒီယာများ၏ သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အကြောင်းအရာတို့ ကိုက်ညီမှုနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိစေရန် အကြောင်းအရာကို လိုအပ်သလို အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
သင်သည် အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို ပို့စ်မတင်ကြောင်း ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ သဘောတူခြင်းကိုလည်း ပြုပါသည်- (က) အခြားတစ်ဖက်၏ မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိပါးသည့်၊ ချိုးဖောက်သည့် သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်သည့် အကြောင်းအရာ၊ (ခ) ကုန်သွယ်မှု လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာ၊ ထိုကုန်သွယ်မှု လျှို့ဝှက်ချက်၏ ပိုင်ရှင်သည် သင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းကိုဖော်ပြရန် ပိုင်ရှင်က သင့်အား ခွင့်ပြုထားခြင်းမှလွဲ၍၊ (ဂ) အခြားသူ၏ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြားသူ၏ သီးသန့်ရှိမှု သို့မဟုတ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု အခွင့်အရေးကို ထိပါးသော အကြောင်းအရာ၊ (ဃ) အသရေဖျက်သော၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျစေသော၊ ရင့်သီးသော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ အနိုင်အထက်ပြုသော၊ အမုန်းပွားသော၊ စော်ကားသော သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သော အကြောင်းအရာ၊ (င) မမှန်ကန်ကြောင်း၊ အထင်အမြင်မှားစေကြောင်း၊ လှည့်စားကြောင်း သင်က သိလျက်နှင့် ထင်မြင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြောင်းအရာ၊ ၎င်းတွင် အခြားသူဟန်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် သင်၏ ပတ်သက်မှုကို မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြခြင်း ပါဝင်သည်၊ (စ) အခြားသူများ၏ အတိအလင်း အခွင့်အာဏာပေးမှုနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထိုသူများ၏ သီးသန့် သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား ခွဲခြားသိနိုင်သော အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ၊ (ဆ) စနစ်၊ ဒေတာ သို့မဟုတ် အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာကို ပျက်စီးစေရန်၊ ထိခိုက်နစ်နာအောင် နှောင့်ယှက်ရန်၊ တိတ်တခိုးကြားဝင်နှောင့်ယှက်ရန် သို့မဟုတ် သိမ်းယူရန် ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟတ်ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်း စက်ကိရိယာများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကန့်သတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်၊ ထရိုဂျင်ဟော့စ်၊ ပိုးမွှား၊ ချိန်ကိုက်ဗုံး သို့မဟုတ် အခြားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်း လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် အင်ဂျင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ လင့်ခ်များ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ၊ နှင့်/သို့မဟုတ် (ဇ) ထိခိုက်သော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းသော၊ အနှောင့်အယှက်ပေးသော၊ နှိပ်စက်သော၊ အသရေဖျက်သော၊ ရိုင်းစိုင်းသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ သိက္ခာချသော၊ အခြားသူ၏ သီးသန့်ဖြစ်မှုကို မနှစ်သက်ဖွယ်၊ လူမျိုးရေးအရ၊ သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကန့်ကွက်ဖွယ် ကျူးကျော်သော သို့မဟုတ် အရွယ်မရောက်သေးသူများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထိခိုက်စေသော သို့မဟုတ် ထိခိုက်စေသည်ဟု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ယူဆရသော အကြောင်းအရာ။
ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးခြင်းအတွက် ဥပဒေများနှင့် ကျင့်သုံးမှု
သင်သည် ဥပဒေနှင့် မညီသော သို့မဟုတ် ဤဝန်ဆောင်မှုများတွင် တားမြစ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်ဟူသမျှအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုကြောင်း အာမခံပြီး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးကို လိုက်နာရန် သဘောတူရာရောက်သည်။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သင်နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဟူသမျှသည် အောက်ပါတို့ကို မပြုလုပ်ကြောင်းနှင့် ပြုလုပ်ခွင့်မပေးကြောင်း ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အာမခံသည်-
ဝန်ဆောင်မှုများကို ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သို့မဟုတ် တရားမဝင်လုပ်ငန်းများအား မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်း၊
အထက်ပါ "သုံးစွဲသူ သဘောတူညီမှု” လိုင်စင်ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် သုံးစွဲသူ အကြောင်းအရာများကို အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပို့စ်တင်ခြင်း၊
မည်သူ့ကိုမဆို စပမ်းများပို့လွှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း၊
ဝန်ဆောင်မှုများကို သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတစ်ဦးဦးကို ပျက်စီးစေနိုင်သော၊ မလုပ်မကိုင်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ဝန်ပိစေနိုင်သော၊ ထိခိုက်စေနိုင်သော၊ သို့မဟုတ် အခြားသူက ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင် ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်နိုင်သော၊ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် စနစ်များကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အပြုအမူတစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း၊
ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အများသုံးမဟုတ်သော ဧရိယာများ သို့မဟုတ် St. Jude ၏ ကွန်ပျူတာစနစ်များ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ကွန်ပျူတာစနစ်များကို ဝင်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဆော့ခြင်း၊
စနစ် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်တစ်ခုခု၏ ဟာကွက်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် အထောက်အထားစိစစ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှောင်တိမ်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများက ပေးအပ်ထားသော သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များမှလွဲ၍ ဝန်ဆောင်မှုများကို အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးဦး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များအပါအဝင် အချက်အလက်တစ်ခုခုကိုရယူရန် ပြောင်းပြန်ရှာဖွေခြင်း၊ ခြေရာကောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှာဖွေခြင်း၊
St.Jude ၏ စာဖြင့် ကြိုတင်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးရန် စက်ရုပ်များ၊ စပိုက်ဒါများ၊ အော့ဖ်လိုင်း ဖတ်ရှုရေးစနစ်များ၊ ဒေတာ စုဆောင်းရေးများ အပါအဝင် အလိုအလျောက်စနစ်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ သို့သော် အများပြည်သူသုံး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် အများသုံးအဖြစ် ရှာဖွေနိုင်သော အချက်အလက်ကုန်ကြမ်းအညွှန်းများ ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများထံမှ အချက်အလက်ကုန်ကြမ်းများကို ကူးယူရန် စပိုက်ဒါများ သို့မဟုတ် စက်ရုပ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည် (သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်ကုန်ကြမ်းများ၏ တစ်ခဏမှတ်ဉာဏ်များ သို့မဟုတ် မော်ကွန်းများ မပါဝင်ပါ၊ St. Jude သည် ယေဘုယျအတွက်ဖြစ်စေ သီးသန့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ဖြစ်စေ ထိုခြွင်းချက်များကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်)၊
အီးမေး (သို့) ပို့စ်တစ်ခုခုတွင် (သို့) ပြောင်းလဲထားသော၊ လှည့်ဖြားသော၊ ရင်းမြစ်ဖော်ပြချက် မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးချရာတွင် TCP/IP ပက်ကေ့ချ်ခေါင်းစီး သို့မဟုတ်ခေါင်းစီးအချက်အလက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အတုပြုလုပ်ခြင်း။
ဝန်ဆောင်မှုများကို သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတစ်ဦးဦးကို ပျက်စီးစေနိုင်သော၊ မလုပ်မကိုင်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ဝန်ပိစေနိုင်သော၊ ထိခိုက်စေနိုင်သော၊ သို့မဟုတ် အခြားသူက ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင် ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်နိုင်သော၊ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် စနစ်များကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အပြုအမူတစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ်
ဝန်ဆောင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် လွန်ကဲသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေရန်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ် ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဝန်ပိုဖြစ်စေခြင်း၊ ပြည့်လျှံစေခြင်း၊ စပမ်းပို့လွှတ်ခြင်း၊ မေးလ်များဖြင့် ပြည့်နှက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့အပြုအမူမျိုး ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာကို ရေးသားခြင်း နည်းများဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ ဝင်သုံးမှု၊ လက်ခံသူ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း (သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း)။
St. Jude သည် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ၎င်းပါ အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ အကြောင်းအရာများကို ဝင်သုံးမှု သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုအား စောင့်ကြည့်ရန် တာဝန်မရှိသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်၊ ဤစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အခြားတရားဥပဒေဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။
St. Jude သည် အချိန်မရွေး ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ သင့်အကောင့် သို့မဟုတ် အချို့သော လက္ခဏာရပ်များသို့ သင်၏ဝင်သုံးမှုကို ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတွင် ဤစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူများကို အခြားနည်းဖြင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း သို့မဟုတ် အခြားသော အကြောင်းရင်းကြောင့် ကန့်ကွက်သင့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် ယူဆသော သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာသို့ သင်၏ ဝင်ရောက်သုံးစွဲမှုကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ထိုသို့ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အကြောင်းအရာနှင့်တကွ သင့်အကောင့်နှင့် ဆက်စပ်သော အခြားအချက်အလက်များကို ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည် အောက်ပါ “ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်” ကဏ္ဍပါ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်ကို အချိန်မရွေး ပိတ်နိုင်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းများကို သင်က လိုက်နာခြင်းဖြင့် St. Jude သည် သင့်ကို သင့်တစ်ကိုယ်ရေသုံးရန် သီးသန့်ဖြစ်သော၊ စီးပွားဖြစ် သုံးရန်မဟုတ်သော၊ ဝန်ဆောင်မှုများသို့ သင် ဝင်သုံးမှုနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော ကန့်သတ်ချက်ပါရှိသည့်၊ သီးသန့်မဟုတ်သည့်၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်၊ လွှဲပြောင်း၍ မရသည့်၊ ဆင့်ပွားလိုင်စင်ပေး၍မရသည့် (ဆော့ဖ်ဝဲရင်းမြစ်ကုဒ် မပါဝင်သော) လိုင်စင်တစ်ခုကို အကြောင်းအရာများအား ကူးယူရန်နှင့် ပြသရန် ပေးအပ်သည်။ သင်သည် ဤစည်းမျဉ်းများတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ မှီငြမ်းခြင်း၊ ၎င်းကို ကူးချခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ လိုင်စင်ပေးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား ပြသခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား တင်ဆက်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် အမြတ်ထုတ်ခြင်း မပြုရပါ။ သင့်အား ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် အရှိအတိုင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခု၏ မိတ္တူကို တစ်ကိုယ်ရေအသုံးပြုရန်အတွက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက သင်သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော မူပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းကြားစာအားလုံးကို လက်ဝယ်ထားရှိရမည်။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသော လိုင်စင်များနှင့် အခွင့်အရေးများမှလွဲ၍ St. Jude သို့မဟုတ် ၎င်း၏လိုင်စင်ပိုင်ရှင်များက ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သော ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များအရ သင့်အား မည်သည့်လိုင်စင် သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးကိုမျှ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။
St. Jude အကြောင်းအရာများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာ စာချုပ်များ၏ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အခြားဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ St. Jude နှင့် ၎င်း၏လိုင်စင်ပိုင်ရှင်များသည် ဤပလက်ဖောင်းနှင့် St.Jude အကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးစီးပွားအားလုံးနှင့် အဆိုပါအရာများအတွက် နည်းပညာအားလုံးကို သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဆက်စပ်ပါရှိသော ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်များ ပါဝင်သည်။ ဤနေရာတွင် St.Jude အသုံးပြုသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၊ လိုဂို၊ ကုန်သွယ်မှုအမည်နှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည် St.Jude ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် St.Jude ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော အသက်ဝင်ပါမည်။ အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၊ လိုဂို၊ ကုန်သွယ်မှုအမည်နှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူသည် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ စည်းကမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကို လိုက်နာရမည်။ ၎င်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် သုံးစွဲသူနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများအပြင် အပ်လုဒ်လုပ်ထားသည့် ဒေတာများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူက ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ဒေတာ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို သုံးစွဲခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သီးသန့်ကန့်သတ်ချက်ဟူသမျှ ပါဝင်သည်။
St. Jude အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိ နေရာဒေသများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်တော်ကြောင်း သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်ကြောင်း ကိုယ်စားမပြုပါ၊ ထို့အပြင် ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုများ တရားမဝင်သည့် နေရာဒေသများတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးခြင်းအား တားမြစ်ထားပါသည်။ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပတွင် ရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးပါက သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေသည် သင့်တရားစီရင်ပိုင်နက်အတွင်းရှိ ဥပဒေနှင့် တစ်ထပ်တည်းတူညီသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုကို ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မှတ်သားထားစေလိုပါသည်။ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါက (၁) သင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်သော အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက် ရယူစုဆောင်းသော အချက်အလက်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အခြားတရားစီရင်ပိုင်နက်များသို့ လွှဲပြောင်းကောင်း လွှဲပြောင်းနိုင်သည်၊ ထို့အပြင် (၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် သင်သည် ၎င်းတို့အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စီမံမှုနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပသို့ ဆက်စပ်လွှဲပြောင်းမှုများကို အတိအလင်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးသည်ဟု သိရှိစေလိုပါသည်။
မူပိုင်ခွင့် မူဝါဒနှင့် တိုင်ကြားချက်များ
သုံးစွဲသူများသည် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆသည်။ သင့်တော်သော အခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို အကြိမ်ကြိမ်ထိပါးချိုးဖောက်သော သို့မဟုတ် အကြိမ်ကြိမ်ထိပါးချိုးဖောက်သည်ဟု ယုံကြည်ရသော သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုများဝင်သုံးခွင့် ရပ်စဲမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများ၏ မူပိုင်ခွင့်များကို ထိပါးချိုးဖောက်သော အကြောင်းအရာများသို့ ဝင်သုံးခွင့်ကို ဖယ်ရှား သို့မဟုတ် ပိတ်ပါမည်။ မူပိုင်ခွင့် ထိပါးချိုးဖောက်သော အချက်အလက်ကုန်ကြမ်း သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့် ထိပါးချိုးဖောက်သော လုပ်ရပ်ပါဝင်သည့် အွန်လိုင်းတည်နေရာတစ်ခုသို့ ညွှန်သည့် လင့်ခ်များ သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းချက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် ဖယ်ရှား သို့မဟုတ် ပိတ်ပါမည်။
Digital Millennium Copyright Act (ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ် မူပိုင်ခွင့် အက်ဥပဒေ) (ခေါင်းစဉ် ၁၇၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေအတွင်း ပါဝင်) (“DMCA”) ကို လိုက်နာရန်အတွက် St. Jude သည် အခြားသူများ၏ ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်များကို ထိပါးချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော အကြောင်းအရာကို ချက်ချင်းဖယ်ရှားပေးရန်အတွက် မူဝါဒတစ်ခုကို အတည်ပြုပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ သင့်လက်ရာကို ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သည့် အပြုအမူတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အသုံးပြုခံနေရကြောင်း ယူဆပါက St. Jude ၏ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ထံ စာဖြင့်ရေးသား အကြောင်းကြားပါ။ အကြောင်းကြားစာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သင့်သည်-
မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု တောင်းဆိုသော ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာ ရရှိထားသူ၏ အီလက်ထရောနစ် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ရေး လက်မှတ်၊
ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု တောင်းဆိုသော မူပိုင်ခွင့်ရှိ လက်ရာအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်၊ ၎င်းတွင် မူပိုင်ခွင့်ရှိလက်ရာ မိတ္တူတစ်စောင် သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ရှိလက်ရာကို မြင်တွေ့နိုင်သော ဝဘ်စာမျက်နှာ ပါဝင်ရမည်၊
မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်ထားသည်ဟုဆိုသော ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်ရှိ တည်နေရာ၊ သို့မဟုတ် အဆိုပါအကြောင်းအရာပါဝင်သော အခြားဝဘ်ဆိုက်သို့ လင့်ခ် သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းချက်၊
သင့်အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ၊
မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စဖြစ်ပွားနေသော အကြောင်းအရာအား အသုံးပြုမှုကို မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၊ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဥပဒေက ခွင့်ပြုမထားဟု သင်က သဘောရိုးဖြင့် ယုံကြည်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်
ဤအကြောင်းကြားစာပါ အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်တိကျကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုနှင့် သင်သည် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု တောင်းဆိုသော အကြောင်းအရာ၏ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာရရှိထားကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ။
သတ်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ
St. Jude ၏ ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု တိုင်ကြားချက်များအား အကြောင်းကြားရန် မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ZwillGen PLLC ဖြစ်သည်။ ZwillGen ကို 1900 M. Street, NW Washington, D.C. 20036၊ dmca@zwillgen.com၊ ဖုန်း- 202-296-3585၊ ဖက်စ်- 202-706-5298 တွင် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သင်တင်ထားသော အကြောင်းအရာကို မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သည်ဟု အရေးဆိုထားကြောင်း အကြောင်းကြားစာရရှိပါက သင်သည် St. Jude ထံ “တန်ပြန် အသိပေးချက်” ပို့နိုင်သော အခွင့်အရေးရှိသည်။ တန်ပြန် အသိပေးချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်ထံ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် စာရေးသားပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် အောက်ပါအချက်များ အဓိကပါဝင်ရမည်-
သုံးစွဲသူ၏ ကိုယ်တိုင်ရေး သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် လက်မှတ်၊
ဖယ်ရှားခံရသော သို့မဟုတ် ဝင်သုံးခွင့်ပိတ်ခံရသော အကြောင်းအရာ၏ အထောက်အထားနှင့် ဖယ်ရှားမခံရမီ သို့မဟုတ် ဝင်သုံးခွင့် အပိတ်မခံရမီ အဆိုပါအကြောင်းအရာ တည်ရှိခဲ့သော တည်နေရာ၊
ဖယ်ရှားရမည့် သို့မဟုတ် ပိတ်ရမည့်အကြောင်းအရာကို မှားယွင်းစွာ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုမှုလွဲမှားစွာ ဖယ်ရှားခြင်းကြောင့် အကြောင်းအရာ ဖယ်ရှားခံရကြောင်း သို့မဟုတ် အပိတ်ခံရကြောင်း သုံးစွဲသူက သဘောရိုးဖြင့် ယုံကြည်သည့် ကျမ်းကျိန်လွှာနှင့်
သုံးစွဲသူ၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လိပ်စာတည်ရှိသော တရားစီရင်ရေးခရိုင်အတွက် ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး၏ တရားစီရင်မှုကို သုံးစွဲသူက သဘောတူကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပတွင် ဖြစ်ပါက St. Jude ရှိနေနိုင်သော တရားစီရင်ရေးခရိုင်တစ်ခုခုအတွက် အထက်ပါအတိုင်း သဘောတူကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် သုံးစွဲသူသည် အထက်ပါအကြောင်းကြားစာများပေးပို့သူ သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ စီမံဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို လက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်။
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ကြောင်း အရေးဆိုမှု အကြောင်းကြားစာပို့သူ သို့မဟုတ် တန်ပြန် အသိပေးချက်ပေးပို့သူသည် မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေအရ သင်၏တာဝန်များကို အတည်ပြုရန်အတွက် ရှေ့နေတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ၊ သို့မဟုတ် 17 U.S.C. §512 ကို ဖတ်ရှုပါ။
DCMA အရ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ကြောင်း အရေးဆိုမှု အသိပေးချက် သို့မဟုတ် တန်ပြန် အသိပေးချက်အတွင်း တမင်တကာ မှားယွင်းဖော်ပြမှုများ ပြုလုပ်ပါက ထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် တာဝန်ခံရနိုင်သည်။ St. Jude သည် ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ပြီး မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ကြောင်း အရေးဆိုမှု အသိပေးချက် ပေးပို့သူ သို့မဟုတ် တန်ပြန် အသိပေးချက်ပေးပို့သူထံမှ ထိခိုက်နစ်နာကြေး တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ST. JUDE သည် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အာမခံကိုမျှ မပေးပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူသည် သုံးစွဲသူကိုယ်စားနှင့် သုံးစွဲသူ ပါဝင်ပတ်သက်နေသော အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစည်းအရုံးတစ်ခုခု၏ကိုယ်စား အသုံးပြုမှုတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း လက်ခံသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများကို "အရှိအတိုင်း" ပေးအပ်ထားပြီး အတိအလင်းဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ မည်သည့်အမျိုးအစား အာမခံကိုမျှ မပေးပါ၊ ထိုသို့အာမခံမပေးမှုတွင် စျေးကွက်ဝင်ခြင်း၊ တိကျသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုမရှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ST. JUDE အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ယင်းတွင်ပါရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် လုံခြုံကြောင်း၊ မှန်ကန်တိကျကြောင်း၊ စိတ်ချယုံကြည်ရကြောင်း၊ ပြတ်တောက်မှု မရှိကြောင်း၊ အမှားကင်းစင်ကြောင်း အာမ မခံပါ။ ST. JUDE အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည် ဆေးညွှန်းလိုအပ်သော ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များဆိုင်ရာ အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လူနာများတွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့်များ သို့မဟုတ် အခြားအစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကြောင်း အာမ မခံပါ။ ST. JUDE သည် ၀န်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ပါ၀င်သော အကြောင်းအရာများအတွင်းရှိ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အကြောင်းအရာများ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ ပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် ဒေတာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမျှ မပေးပါ။ ST. JUDE အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု သို့မဟုတ် တည်နေရာတစ်ခုအတွင်း လုံခြုံမှုရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ချွတ်ယွင်းချက် သို့မဟုတ် အမှားများရှိပါက ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲသည် ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အစိတ်အပိုင်းများ ကင်းရှင်းကြောင်း အာမ မခံပါ။ အချို့သောပြည်နယ်များတွင် အာမခံချက်၏ သက်တမ်း ကန့်သတ်ချက်ကို ခွင့်မပြုပါ၊ ထို့ကြောင့် အထက်ပါကန့်သတ်ချက်များသည် သင်နှင့် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
St.Jude ၏ အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် St.Jude ကိုယ်စား ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပါ၀င်သောအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမျှ အသက်ဝင်ပါမည်။ St. Jude သည် ၀န်ဆောင်မှုများ၏ မည်သည့်အင်္ဂါရပ် (သို့) လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆိုအချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အများဆုံးခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ ST. JUDE သည် အာမခံအားလုံးကို ငြင်းဆိုသည်။ ပေါ့ဆမှုအပါအဝင် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မျှ ST. JUDE၊ ၎င်း၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်မှုတစ်ခုခုကြောင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်မှုတစ်ခုခုအတွင်း၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုမှုတွင် ချွတ်ယွင်းမှု သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးမှု၊ သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် (ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ၊ အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှုများ သို့မဟုတ် ဒေတာဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် စီးပွားရေးကြန့်ကြာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထိခိုက်မှုများအပါအဝင်) တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ၊ ဆင့်ပွားဖြစ်စေ၊ အထူးတလည်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်ဖြစ်စေ ထိခိုက်မှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ သို့မဟုတ် ကုန်ကျမှုများအတွက် ထိုကဲ့သို့ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း အကြံပြုထားစေကာမူ ထိုထိခိုက်မှုများသည် စာချုပ်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ တရားမ နစ်နာမှုပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ တင်းကျပ်သော တာဝန်ရှိမှုပေါ်တွင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ အခြေခံထားသည်ပါက စာချုပ်၊ တရားမ နစ်နာမှု၊ တင်းကျပ်သော တာဝန်ရှိမှု၊ ပေါ့ဆမှု သို့မဟုတ် အခြားသော ဥပဒေရေးရာ သို့မဟုတ် တူညီသောသဘောတရားအောက်တွင်မျှ တာဝန်ခံခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သုံးစွဲသူက အထူးအားဖြင့် သဘောတူသည်မှာ ST. JUDE သို့မဟုတ် အခြားလိုင်စင်ရှိသူ၊ ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူ၊ ကန်ထရိုက်တာ၊ တစ်ဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် ST. JUDE သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာရှိများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဆက်ခံသူများ သို့မဟုတ် တာဝန်လွှဲအပ်ခံရသူများအား အချက်အလက်ပေးအပ်သူများသည် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိသော အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ အကြောင်းရင်းမရွေး သို့မဟုတ် သဘောတရားမရွေး မည်သည့်သုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းပေါ်တွင်မျှ တာဝန်မရှိပါ။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါက ST. JUDE နှင့် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာရှိများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဆက်ခံသူများ သို့မဟုတ် တာဝန်လွှဲအပ်ခံရသူများ၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုခအတွက် သုံးစွဲသူက ပေးရသည့် ငွေကြေးပမာဏအတိုင်း ကန့်သတ်ရန် ပါဝင်သူများ သဘောတူသည်။
အချို့သောပြည်နယ်များတွင် ဤဆွယ်ပွား သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့်နစ်နာမှုများကို ချန်လှပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ထိုကဲ့သို့သော တရားစီရင်မှုဒေသတစ်ခုတွင် နေထိုင်ပါက အထက်ပါကန့်သတ်ချက်များနှင့် ချန်လှပ်မှုများသည် သင်နှင့် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားတစ်ဖက်ဖက်၏ ပေါ့ဆမှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည့် ထိခိုက်နစ်နာမှုတစ်ခုခုအတွက် မည်သူ့ကို သို့မဟုတ် မည်သည့်သုံးစွဲသူအပေါ်တွင်မျှ တာဝန်မရှိပါ။
သုံးစွဲသူသည် St.Jude သို့မဟုတ် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းက တောင်းဆိုသည့် အောက်ပါတို့နှင့်ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ တာဝန်ရှိမှုများ၊ ဒဏ်ခတ်မှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ်များ (ထိုက်သင့်သော ရှေ့နေခနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ အပါအဝင်) ကို St.Jude၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိခင် သို့မဟုတ် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်ခံသူများ၊ လွှဲအပ်ခံရသူများ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရသူများနှင့်တကွ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာရှိများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဝန်ထမ်းများ မကျခံရစေရန်၊ လျော်ကြေးပေးရန်နှင့် မထိခိုက်စေရန် သဘောတူသည်- (က) ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် သင်၏သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာကို သင် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် တလွဲအသုံးပြုမှု၊ (ခ) ဤစည်းမျဉ်းများကို သင်ချိုးဖောက်မှု၊ (ဂ) သက်ဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်/ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းတစ်ခုခုကို သင်က ချိုးဖောက်မှု သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရမှု၊ သို့မဟုတ် (ဃ) သင်၊ သင့်အကောင့်ကို အသုံးပြုနေသော အခြားသူတစ်ဦးဦးက အခြားသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ဉာဏပစ္စည်းကို ချိုးဖောက်မှု။ St. Jude သည် သင်က လျော်ကြေးပေးရသည့် မည်သည့်အရာကိုဖြစ်စေ သီးသန့်ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိပြီး ထိုဖြစ်ရပ်တွင် သင်သည် ရနိုင်သော ကာကွယ်မှုတစ်ခုခုကို အကဲဖြတ်ရာတွင် St.Jude ကို အကူအညီပေးပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မည်။
ဤကဏ္ဍကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။ ၎င်းသည် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်အပါအဝင် သင်၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်နှင့် ST. JUDE အနေဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းများသည် ပြည်နယ်ချင်း ကုန်သွယ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းနှင့် ဖက်ဒရယ် ခုံသမာဓိ အက်ဥပဒေသည် ဤခုံသမာဓိပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုနှင့် ကျင့်သုံးမှုတို့အပေါ် အုပ်ချုပ်မှုရှိကြောင်း သဘောတူသည်။
ဤကဏ္ဍသည် ကျယ်ပြန့်စွာ အနက်ကောက်ယူရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိ အငြင်းပွားမှုများရှိပါက ၎င်းတို့ကို အုပ်ထိန်းသည်၊ ထိုအငြင်းပွားမှုများတွင် စာချုပ်၊ တရားမ နစ်နာမှု၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်၊ လိမ်လည်မှု၊ အခြားသော ဥပဒေဆိုင်ရာ သဘောတရားတစ်ခုခုကို လွဲမှားစွာဖော်ပြမှုတို့ပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့အကြား ဆက်ဆံရေးတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်သော တောင်းဆိုမှုများဖြစ်စေ၊ ဤသဘောတူညီချက်မတိုင်မီ သို့မဟုတ် ယခင်သဘောတူညီချက်များ (ကြော်ငြာနှင့် ဆက်စပ်သော တောင်းဆိုချက်များအပါအဝင်) မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တောင်းဆိုချက်များဖြစ်စေ နှင့် ဤစည်းမျဉ်းများကို ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော တောင်းဆိုချက်များဖြစ်စေ ပါဝင်သည်။ ဤကျယ်ပြန့်သော တားမြစ်ချက်တွင် ချန်လှပ်ထားသည့် တစ်ခုတည်းသောအငြင်းပွားမှုမှာ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အချို့သောဥာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့် တရားရုံးငယ်များ၏တောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကို သဘောတူခြင်းအားဖြင့် St.Jude နှင့်အငြင်းပွားမှု အားလုံးကို အောက်ပါအတိုင်းဖြေရှင်းရန် သင်သဘောတူသည်-
စည်းမျဉ်းများကို လက်ခံခြင်း. St. Jude က ဤစည်းမျဉ်းများရှိ အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်မှုကို ထိုအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို တရားဝင်စွန့်လွှတ်ခြင်းဟု ယူဆမည်မဟုတ်ပါ။ St.Jude ၏ အမှန်တကယ် အခွင့်အာဏာရှိသူ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက စာဖြင့်ရေးသားပြီး လက်မှတ်ထိုးမှသာ ထိုသို့သော အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို စွန့်လွှတ်မှု အသက်ဝင်ပါမည်။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ ဤစည်းမျဉ်းများအောက်ရှိ ကုစားခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ပါဝင်သူတစ်ဖက်ဖက်က ကျင့်သုံးပါက ဤစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်ဖြစ်စေ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အခြားကုစားခြင်းများကို ယုတ်လျော့ ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။
ကနဦး အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း- အငြင်းပွားမှုအများစုကို တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုဘဲ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သင်သည် St. Jude အကူအညီကို GeneralCounselOffice@stjude.org တွင် ရယူနိုင်သည်။ ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသေးစားတောင်းဆိုမှုများအတွက် တရားရုံးတွင် တောင်းဆိုမှုများမှအပ ပါဝင်သူများသည် အငြင်းပွားမှု၊ တောင်းဆိုမှု၊ မေးခွန်း သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲမှုများကို St.Jude နှင့် တိုက်ရိုက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအားထုတ်ရန် သဘောတူကြပြီး မှန်ကန်သော စိတ်ရင်းဖြင့် ညှိနှိုင်းမှုများသည် တရားစွဲဆိုရန် သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန် အစပျိုးထားသည့် တစ်ဖက်ဖက်အတွက် သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ရမည်။
တရားဝင် တာဝန်ခံစေသော ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း- ပါဝင်သူများသည် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ကနဦး အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်တွင် တရားဝင်မဟုတ်သော အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် အနည်းဆုံး ရက်သုံးဆယ် (၃၀) ကြာပြီးနောက် သဘောတူနိုင်သော ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခု မရရှိခဲ့ပါက နှစ်ဖက်စလုံးမှ တောင်းဆိုမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းအနေဖြင့် ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စတင်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းများ (စည်းမျဉ်းများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ချိုးဖောက်မှုအပါအဝင်) မှ သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဉ်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော တောင်းဆိုချက်အားလုံး၊ ပါဝင်သူများ၏ အချင်းချင်းဆက်ဆံရေး နှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်က အသုံးပြုမှုအား JAMS က စီမံအုပ်ချုပ်သော တာဝန်ခံစေသည့် ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် အပြီးသတ်ဖြေရှင်းရမည်။ အုပ်စုကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို အုပ်ချုပ်သော သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုသော စည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မပါဝင်ပါက ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း စတင်ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် $250,000 ထက်မကျော်သော တောင်းဆိုမှုများအတွက် JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules အတိုင်း ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ပြီး $250,000 ထက်ကျော်သော တောင်းဆိုမှုများတွင် JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures အတိုင်း ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုမှုတစ်ခုသည် ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်စေ၊ စွန့်လွှတ်ကြောင်း တရားဝင်မှုကို တရားတပေါင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်စေ ဤစည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ ကို အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်း၊ သုံးစွဲနိုင်မှု၊ ကျင့်သုံးနိုင်မှု သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းမှုများမှ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အငြင်းပွားမှုအားလုံးကို ဖြေရှင်းရန် ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းတရားရုံး သို့မဟုတ် အေဂျင်စီမဟုတ်သော ခုံသမာဓိလူကြီးထံတွင် အခွင့်အာဏာအပြည့်အဝ ရှိရမည်။ အငြင်းပွားမှုများတွင် ဤစည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပျက်ပြယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ပြယ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုဟူသ၍ ပါဝင်သည်။ ဥပဒေအရ တရားရုံးတွင် ဆုံးဖြတ်မှု သို့မဟုတ် တန်းတူညီမျှမှုအရ ပေးအပ်နိုင်သည့် မည်သည့်သက်သာခွင့်ကိုမဆို ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ခုံသမာဓိလူကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စာဖြင့်ရေးသားပြီး ပါဝင်သူများအပေါ်သက်ရောက်စေရမည်ဖြစ်ပြီး တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော မည်သည့်တရားရုံးတွင်မဆို ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် တင်သွင်းနိုင်သည်။ သင်နှင့် ST. JUDE သိရှိနားလည်သည်မှာ မလိုက်နာမနေရဖြစ်သော ဤခုံသမာဓိပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပျက်ကွက်ပါက ပါဝင်သူတိုင်းသည် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်နှင့် ဂျုရီလူကြီးဖြင့် တရားစီရင်ခွင့် ရှိရမည်။ သင်နှင့် ST. JUDE ထပ်မံသိရှိနားလည်သည်မှာ ဖြစ်ရပ်အချို့တွင် ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များသည် တရားစွဲဆိုမှုကုန်ကျစရိတ်များထက် ကျော်လွန်နိုင်ပြီး သက်သေခံထွက်ဆိုပိုင်ခွင့်သည် တရားရုံးထက် ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် အကန့်အသတ်ပိုရှိနိုင်သည်။
ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်။ ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို စတင်ရန် သင်သည် အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်- (က) သင်ပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ပမာဏနှင့် တောင်းဆိုမှု၏ ရှင်းလင်းချက်ပါဝင်သော ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို ရေးသားပါ (ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တောင်းဆိုမှု မိတ္တူတစ်စောင်ကို www.jamsadr.com တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်)၊ (ခ) ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တောင်းဆိုမှု မိတ္တူသုံးစောင်နှင့်တကွ သင့်တော်သော လျှောက်လဲခကို သက်ဆိုင်ရာ JAMS ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းရေးဌာနသို့ ပေးပို့ပါ၊ ၎င်းကို http://www.jamsadr.com/locations တွင် တွေ့နိုင်သည်၊ ထို့အပြင် (c) ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တောင်းဆိုမှု မိတ္တူတစ်စောင်ကို St. Jude ထံသို့ 262 Danny Thomas Place, MS 280, Memphis, TN 38105, ATTN: Legal.
ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် အခကြေးငွေ. ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် လျှောက်ထားခသည် တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထက် ကျော်လွန်ပါက St. Jude သည် အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးဆောင်ပါမည်။ အကယ်၍ ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေမထွက်ပါက St. Jude သည် လျှောက်ထားခများနှင့် ခုံသမာဓိလူကြီးနှင့် ကြားနာမှုစရိတ်များအပါအဝင် JAMS တောင်းခံသော အခကြေးငွေများကိုပေးဆောင်ပါမည်။ ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်/သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် အခြားနည်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါက သင့်ရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေအတွက် သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။
ဆွေးနွေးရန်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း။ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါက သင် လျှောက်ထားသည့်အချိန်အတွင်း သင်နေထိုင်သောခရိုင်တွင် ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပတွင် နေထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ခြင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တင်နက်စီပြည်နယ်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်နှင့် St Jude သည် ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို တောင်းဆိုရန်၊ ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုအတိုင်း ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်၊ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိလူကြီး၏ စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကို အတည်ပြုရန်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံရန် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အလို့ငှာ ရှယ်ဘီခရိုင်၊ တန်နက်စီပြည်နယ်ရှိ ဖက်ဒရယ် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တရားရုံးတစ်ခုခုရှိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထံသို့ တင်သွင်းရန် သဘောတူသည်။
အုပ်စုကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း တရားဝင်စာ- ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီက အုပ်စုကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်မှု (သို့) အခြားကိုယ်စားလှယ် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ တစ်ဦးချင်းစီ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ရန် ပါဝင်သူများက ထပ်မံသဘောတူသည်၊ ထို့အပြင် ပါဝင်သူများသည် အုပ်စုကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လျှောက်ထားခွင့်၊ သို့မဟုတ် အုပ်စုကိုယ်စားအဖြစ် သက်ညှာခွင့် တောင်းဆိုခွင့်ကိုလည်း အတိအလင်း စွန့်လွှတ်သည်။ သင်နှင့် ST. JUDE အနေဖြင့် တစ်ဦးက အခြားတစ်ဦးကို မိမိ၏ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တစ်ဦးချင်းအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်သာ တောင်းဆိုမှုပြုပြီး အုပ်စုကိုယ်စား သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ဟုဆိုသော အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း တစ်ခုခုအတွင်း တရားလို သို့မဟုတ် အုပ်စုကိုယ်စား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သဘောတူသည်။ အုပ်စုကိုယ်စား အရေးယူခြင်းကို စွန့်လွှတ်မှုသည် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပျက်ပြယ်ကြောင်း သို့မဟုတ် အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း တရားရုံး (သို့) ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတစ်ခုခုတွင် ဆုံးဖြတ်ပါက ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတစ်ခုကို အုပ်စုကိုယ်စားအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ ထိုအခါ အထက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်မှု ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် လုံးလုံးလျားလျား တရားမဝင် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သူများသည် အငြင်းပွားမှုများအား ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် သဘောမတူကြောင်း မှတ်ယူရမည်။
ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသေးစားတောင်းဆိုမှုများအတွက် တရားရုံးမှ တောင်းဆိုမှုများ။ အငြင်းပွားမှုအားလုံးကို ခုံသမာဓိဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ပါဝင်သူအားလုံး ဆုံးဖြတ်သော်လည်း ပါဝင်သူတစ်ဖက်ဖက်သည် ခိုးယူမှု၊ ခိုးကူးမှု သို့မဟုတ် ဉာဏပစ္စည်းကို တရားမဝင် အသုံးပြုမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သော စည်းကမ်းအတိုင်း ကျင့်သုံးရေး တောင်းဆိုချက်များ၊ တရားဝင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ရလိုမှုများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်တရားရုံး သို့မဟုတ် အမေရိကန်နိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံးသို့ တင်သွင်းပြီး မိမိတို့၏ ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်နိုင်သည် ("ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်" ဆိုသည်မှာ မူပိုင်မှုများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ကုန်သွယ်မှု လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဆိုလိုပြီး သီးသန့်ရှိမှု သို့မဟုတ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု အခွင့်အရေးများကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ)။ ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည် ထိုတရားရုံး၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် အတိုင်းအတာအတွင်း အငြင်းပွားမှုများ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုများအတွက် အသေးစားတောင်းဆိုမှုတရားရုံးတစ်ခုတွင်လည်း သက်ညှာခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
နုတ်ထွက်ရန် အခွင့်အရေး ရက် ၃၀- သင်သည် "ခုံသမာဓိစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် အုပ်စုကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်ခြင်းမှ နုတ်ထွက်ခြင်း" ဟူသော အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် GeneralCounselOffice@stjude.org သို့ စာဖြင့် ရေးသား အကြောင်းကြားခြင်းပြီး နုတ်ထွက်ရန် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် နုတ်ထွက်ပိုင်ခွင့်နှင့် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ခုံသမာဓိစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် အုပ်စုကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏ ကန့်သတ်မှုမှ လွတ်ကင်းခွင့်ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကြားစာကို ဝန်ဆောင်မှုများကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုပြီး ရက်သုံးဆယ် (၃၀) အတွင်း ပေးပို့ရမည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက သင်သည် ဤစာပုဒ်များပါ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အငြင်းပွားမှုများကို ခုံသမာဓိဖြင့် ဖြေရှင်းရန် တာဝန်ရှိပါမည်။ သင်သည် ဤခုံသမာဓိ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှ နုတ်ထွက်ပါက St. Jude သည်လည်း ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
ဤကဏ္ဍသို့ ပြောင်းလဲမှုများ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကဏ္ဍတွင် အပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အကြောင်းကြားစာကို ရက်ပေါင်းသုံးဆယ် (၃၀) ကြိုတင်ပေးပို့ပါမည်။ ထိုသို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး ရက်ပေါင်းသုံးဆယ် (၃၀) အကြာတွင် ပြင်ဆင်မှုများ စတင်အသက်ဝင်ပါမည်။ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ် (၃၀) ကျော်သောအခါမှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများအတွက် ဤကဏ္ဍရှိ အပြောင်းအလဲများကို နောက်မှ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးချပါမည်။ "ဤကဏ္ဍသို့ ပြောင်းလဲမှုများ" ရှိ ဤကဏ္ဍခွဲသည် ခိုင်ခံ့ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် မမှန်ကန်ကြောင်း တရားရုံး သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိက ဆုံးဖြတ်ပါက ဤကဏ္ဍခွဲကို “အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း” ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော ကဏ္ဍဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိသည် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင် စတင်အသုံးပြုပြီးနောက် အဦးဆုံး ငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်းကဏ္ဍကို အသုံးပြုပါမည်။
ဆက်လက်တည်ရှိခြင်း- သင်၏ အကောင့် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများ ရပ်စဲပါကလည်း ဤအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းကဏ္ဍ ဆက်လက်တည်ရှိပါမည်။
ဤစည်းမျဉ်းများသည် သုံးစွဲသူနှင့် St.Jude ကြားတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Tennessee ပြည်နယ်အတွင်း သဘောတူညီမှုတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ပြီး တင်နက်စီပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သုံးစွဲသူက သဘောတူသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကို ဥပဒေရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကွဲလွဲခြင်းမှလွဲ၍ တင်နက်စီပြည်နယ်၏ ဥပဒေများက အုပ်ချုပ်ပြီး ထိုဥပဒေများအရ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးစွဲသူက သဘောတူသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများအောက်မှ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုတွင် သုံးစွဲသူသည် ရှယ်ဘီခရိုင်၊ တင်နက်စီပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများရှိ သီးသန့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့ ပေးပို့ရန် ယတိပြတ်သဘောတူသည်။ သုံးစွဲသူသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၊ တရားခွင် ကျင်းပရာနေရာ သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးရန်နေရာ အဆင်မပြေမှု ကန့်ကွက်ခြင်းများကို ထိုတရားရုံးသို့ တရားဝင်စွန့်လွှတ်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းများရှိ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုသည် တရားရုံး သို့မဟုတ် အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ခုံရုံးဖြင့် အာဏာတည်စေ၍ မရနိုင်ပါက ထိုသို့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုအပ်သလောက်အထိ အနည်းဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ် သို့မဟုတ် လျှော့ချမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့် ဤသဘောတူညီချက် အပြည့်အဝအာဏာသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် အခြားနည်းဖြင့် ဖော်ပြခြင်းမှလွဲ၍ ဤစည်းမျဉ်းများသည် သုံးစွဲသူနှင့် St.Jude တို့အကြား ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်သုံးခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးနှင့်ညီမျှပြီး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ St. Jude နှင့် သင့်အကြား ယခင်က နှုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် စာဖြင့် နားလည်မှုများ သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များရှိပါက ဤစည်းမျဉ်းများဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ပါမည်။ သုံးစွဲသူသည် ဤစည်းမျဉ်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံ၍ မရပါ။ ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် မကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများတွင်ပါရှိသော မည်သည့်အရာကိုမဆို ဤစည်းမျဉ်းများဖြင့် အစားထိုးသည်။
စည်းမျဉ်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
St. Jude သည် ဤစည်းမျဉ်းများနှင့် ဤနေရာတွင် ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် ပေါင်းစည်းဖော်ပြထားသော အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်မရွေး ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်မှုဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် စတင်သက်ရောက်သော ရက်စွဲအသစ်ကို ဖော်ပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ၀န်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုမှုအပေါ် သက်ရောက်စေမည့် အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါက ပြောင်းလဲမှုများ အသက်မဝင်မီ ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် အကြောင်းကြားစာ တိုက်ရိုက်တင်ခြင်း၊ အီးမေးလ်အသိပေးချက်ပေးပို့ခြင်း (သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်ထားပါက) သို့မဟုတ် အခြားကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သော နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် သင့်ထံ အကြောင်းကြားရန် ကြိုးပမ်းပါမည်။ ၀န်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် ဤသို့သောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ဖော်ပြပြီးနောက် ၀န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပြောင်းလဲမှုများကို သင်သဘောတူခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သဘောမတူပါက ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထပ်ဆောင်းစည်းမျဉ်းများသည် အချို့သော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်သည်၊ ၎င်း၀န်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးမပြုမီ ထပ်ဆောင်းစည်းကမ်းချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ အသိပေးပါမည်။ ဤစည်းမျဉ်းများနှင့် ထပ်ဆောင်းစည်းမျဉ်းများအကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက ထပ်ဆောင်းစည်းမျဉ်းများက ထိန်းချုပ်ပါမည်။
သင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက together@stjude.org တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်တွင် St. Jude Children's Research Hospital သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက hipaaprivacy@stjude.org မှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။